ရုပ်နာမ်ဟာဆင်းရဲပါတယ် | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
← ယောဂီများသို့ —
ရုပ်နာမ်ဟာဆင်းရဲပါတယ်၊ ဒါကို ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်း သိထားပြီးသားပါ။ ဒါကြောင့်လည်း ရုပ်နာမ်ချုပ်ရာ နိဗ္ဗာန်ကို စံချင်ကြတာပေါ့။ ဒါလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်း သိပြီးသားပါ။ တစ်ချို့က ဘာဖြစ်လို့ ခေတ်နောက်ပြန် ဆွဲနေကြတာလည်း။ ကွန်မြူနစ်တွေရဲ့ စကားကို နားယောင်တာနဲ့တူတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာကြည်ညိုရင် မြတ်စွာဘုရား အဆိုအဆုံးအမအတိုင်း လုပ်ပါ။ ရုပ်နာမ်ကို ချုပ်စေခဲ့ပါ – နိဗ္ဗာန်ကို စံဝင်ပါ အပြီးအပိုင်လွတ်မြောက် မှုကိုရယူပါ။ ဒါပဲဖြစ်ပါတယ်။
နိဗ္ဗာန်ထဲကို ရုပ်နာမ်ခေါ်ချင်တယ် ဆိုတာကတော့ တော်တော်မတရားတဲ့ စိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ သာသနာဖျက် စိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်။ နိဗ္ဗာန်မှာ ရုပ်နာမ် လက်ခံလို့ မရပါဘူး။ နိဗ္ဗာန်ဟာ ရုပ်နာမ်ကို လက်ခံလို့ မရသလို၊ တဏှာကိုလည်း လက်ခံလို့ မရပါဘူး။ တဏှာချစ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ သံသရာထဲမှာ လည်ကြပေါ့။ ဒါကတော့ ကိုယ်ချစ်တာကို ကိုယ်ချစ်တဲ့အတိုင်း ခံစားကြပေါ့။ တကယ်နိဗ္ဗာန် စံချင်ရင်တော့ ခန္ဓာနဲ့လည်း သွားလို့မရသလို တဏှာနဲ့လည်း သွားလို့မရပါဘူး။
တဏှာလည်း လိမ်းကြံချင်သေးတယ် – နိဗ္ဗာန်လည်း စံချင်သေးတယ်၊ ရုပ်နာမ်လည်း ချစ်သေးတယ် – နိဗ္ဗာန်လည်း စံချင်သေးတယ် မဖြစ်ပါဘူး။ မဖြစ်တဲ့ဟာက မဖြစ်ပါဘူး။ လောကကြီးမှာ ယုတ်တာက ယုတ်တာပဲ မမြတ်ပါဘူး။ မြတ်တာကလည်း မြတ်တာပါပဲ မယုတ်ပါဘူး။ ယုတ်ခြင်းနဲ့ မြတ်ခြင်းဟာ ပိုင်းခြားထားပါတယ်၊ အဲဒီလိုပဲ (၃၁) ဘုံနဲ့ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်း ပိုင်းခြားထားပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ တဏှာနဲ့ စစ်မန်သော ချမ်းသာခြင်းဟာလည်း ပိုင်းခြားထားပါတယ်။ ဒါကို ဗုဒ္ဓဘာသာတွေက သိပါတယ်။
အခုတော့ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး အဘိဓမ္မာလိုက်မှ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေကြတာလည်း ဒါ တော်တော်ခက်တဲ့ ပြဿနာပါ။ သင်္ခတနဲ့ အသင်္ခတကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် နားမလည်ဘူးဆိုတော့ အဘိဓမ္မာကို အားနာဖို့တော့ ကောင်းပါတယ်။ အဘိဓမ္မာကို လိုက်ရင် သင်္ခတနဲ့ အသင်္ခတကို နားလည်ရမှာပေါ့၊ (၃၁) ဘုံနဲ့ နိဗ္ဗာန် နားလည်ရမှာပေါ့။ အခုတော့ နိဗ္ဗာန်ကို ရုပ်နာမ်နဲ့ သွားချင်တယ်ဆိုတော့ – ဘယ့်နှယ့်လုပ်မလဲ?? ဒါဟာ ဘုရားဟောတရားကို ဘုရားဟောတရားအတိုင်း ကြည်ညိုပါဆို ဘုရားဟောတရားတော့ မကြည်ညိုချင်ဘူး၊ ဆရာကြီးတွေအကြောင်း၊ ဥက္ကဌတွေအကြောင်း၊ သဘာပတိတွေအကြောင်း၊ ပါမောက္ခချုပ်တွေရဲ့အကြောင်းကိုပဲ ကြည်ညိုချင်ကြတယ်ဆိုရင်တော့ ဒါဟာ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲများလွန်းနေပါတယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ များလွန်းနေရင် ဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာပါ။ ကြာရင်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ ဆန့်ကျင့်ဘက်သမားတွေ ဖြစ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် နိဗ္ဗာန်သည် ရုပ်နာမ်ကို လက်မခံ၊ တဏှာကိုလက်မခံကြောင်း ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းက ရင်ကော့ပြီး ကြွေးကြော်ထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်း ပေးလိုက်ပါတယ်။
Tags: Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, သင်္ခတ, သံသရာ, သာသနာ, မြတ်စွာဘုရား
This entry was posted in Buddhism and tagged Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, သင်္ခတ, သံသရာ, သာသနာ, မြတ်စွာဘုရား. Bookmark the permalink.